Liiska 66-da Xildhibaan ee Puntland oo la shaacinayo & Xildhibaanadii Hore oo meesha.. – Radio
Liiska 66-da Xildhibaan ee Puntland oo la shaacinayo & Xildhibaanadii Hore oo meesha..
December 31, 2018	318	Like
Garoowe (Codka Nabadda) Wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Garoowe oo ah caasimadda dowladda Puntland ayaa sheegaya inuu mashquulkii ugu cuslaa saaka ilaa xalay ka socdey xarunta barlamaanka Puntland ee Garoowe.
Gudiga xallinta khilaafaadka iyo ansixinta barlamaanka cusub ayaa ku mashquulsanaa saacadihii ugu dambeeyey kala saarista xubnaha isku haysta qaar kamid ah kuraasta barlamaanka Puntland ee 2019-2023.
Gudiga ayaa lafilayaa inay gelinka dambe ee maanta ilaa caawa si rasmi ah u shaaciyaan 66-da xubnood ee uu ka kooban yahay barlamaanka cusub ee Puntland oo ay kuyar yihiin xildhibaanadii hore ee Puntland.
Maalinimada berri ah ayaa lafilayaa in barlamaanka cusub ee Puntland uu yeesho kulankiisii ugu horreeyey isla markaana uu bilaabo howl maalmeedkiisii ugu horeeyey gaar ahaan doorashada guddoonka barlamaanka iyo madaxda cusub ee Puntland.
Garoowe (Codka Nabadda ) Kadib markii habeenkii xalay ahayd ay ku dhawaaqeen gudida xalinta khilaafaadka Puntland ...